‘हावाको गतिसँग झुक्किएर नेपालमा सलह भित्रिएको हो, तत्काल यी काम गरौँ’ - Dhunibeshi Khabar
‘हावाको गतिसँग झुक्किएर नेपालमा सलह भित्रिएको हो, तत्काल यी काम गरौँ’
काठमाण्डौ – शनिबार नेपाल भित्रिएको सलह किरा देशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ । केही समयअघि नै भारतका विभिन्न ठाउँमा आएको सलह भारतबाट नेपालको तराई जिल्ला हुँदै पहाड प्रवेश गरेको छ । नेपालमा देखिएको सलह किराको झुण्डबाट अहिले नै डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको तर केही विधि अपनाउन सके यसबाट बच्न सकिने विज्ञ र सरकारले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ ।
नेपालमा भित्रिएको सलहले धेरै असर गर्दैन
सलह सामान्यतया ठूलो सङ्ख्यामा आउने र एकै ठाउँमा बस्ने खाने भन्ने थियो तर नेपालमा प्रवेश गरेको सलहको प्रकृति त्यस्तो खालको छैन । प्रारम्भिक अध्ययनले पनि यही नै देखाएको छ । भारतबाट हावा बहने क्रममा नेपालमा सलह आएको छ । हावाको बहावसँगै छरिएर तितरबितर भएर नेपाल आइपुगेको देखिएको छ । ठाउँठाउँमा थोरै सङ्ख्यामा मात्रै यो देखिएको छ । हावाको गतिसँग झुक्किएर यो नेपाल प्रवेश गरेको र यसले कति क्षति पुर्‍याउँछ र कहाँसम्म पुगेको छ भन्नेबारेमा भने विस्तृत अध्ययन भइरहको छ । अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र पालिका मातहतमा रहेर सलह भएको ठाउँमा विषादी छर्कन आग्रह गरेको छ । थोरै मात्रै छ भने अरु विकल्प अपनाउन सकिने तर धेरै मात्रामा छ भने विषादी नै छर्कनुपर्ने भएकोले प्रदेश र पालिका मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । अहिले सलह देखिएका देशका विभिन्न ठाउँमा विषादी छर्कने कामसमेत सुरु भइसकेको छ । सलह किरा जुनसुकै समयमा नेपालका कुनै पनि ठाउँमा पुग्ने भएकोले विषादी र विषादी छर्कने उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।
थाल र टिन ठटाएर भगाउन सकिन्छ
ठूलो आवाज दिइयो भने पनि सलहलाई भगाउन सकिन्छ । आवाज दिएर सलहलाई बालीनालीबाट अलि टाढा पुर्याउन सकिन्छ । थाल र टिन ठटाएर पनि सलहलाई भगाउन सकिन्छ । आवाज दिएर सलह भगाउने विधि अरु देशका धेरै ठाउँमा पनि अवलम्बन गरिएकोले नेपालमा पनि त्यसो गर्न सकिन्छ । सिधै विषादी प्रयोग गर्दा खेतबारीमा विभिन्न समस्या देखिने भएकोले सकेसम्म थाल र टिन ठटाएर अथवा त्यस्तै खालका अरु आवाज दिएर सलहलाई भगाउनु राम्रो हुन्छ ।
झुलको प्रयोग गरौँ
अहिले धान रोपाइँको समय हो । रोप्न ठिक्क पारिएका बिउलाई सलहले नष्ट नपारोस् भन्नको लागि बिउका ब्याडहरुमा झुल लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा सलह धेरै समय नबस्ने भएकोले अहिले बिउ जोगाउन सकियो भने रोप्ने समयमा समस्या नपर्न सक्छ । त्यस्तै धानसँगै अरु खेतीका बिउ उमार्दा पनि ब्याडमा झुलको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
किसान प्राविधिकको सम्पर्कमा बस्नुपर्‍याे
यसले जुनसुकै समयमा दुःख दिन सक्ने भएकोले किसान तत्काल प्राविधिकको सम्पर्कमा बस्नुपर्ने देखिन्छ । पालिकाहरुमा पनि अहिले कृषि प्राविधिकहरु छन्, उनीहरुसँगको सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्छ । जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकहरुसँग पनि सम्पर्कमा बस्नुपर्छ । जहाँ जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँका कर्मचारीहरुसँग समन्वय गरेर कुन विषादी छर्कने, उपकरणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन समयमा छर्कनेलगायत विषयमा तयारी गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा सलहको प्रकृति कस्तो छ ?
नेपालमा देखिएको सलहको प्रकृति हेर्दा तत्कालै व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको छ । तुरुन्तै व्यवस्थापन गरिए ठूलो क्षति हुँदैन भन्ने आँकलन छ । हावाको बहावको अवस्थालाई हेरेर थप अरु आउँछ कि आउँदैन भनेर प्राविधिकले अध्ययन गरिरहेका छन् । अहिले नेपालका जुन जुन भागमा देखिएका छन्, अहिलेकै अवस्थामा ठूलो क्षति पुर्याउने सङ्ख्यामा सलह छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ ।
जहाँ सलह देखिएको छ, त्यहाँ विषादी छर्किएर यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । स्पेयर, विषादी, प्राविधिक तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने र त्यसो नगरे यसले भोलिका दिनमा धेरै नै नोक्सानी गर्न सक्ने अवस्था छ । प्राविधिकहरुले यो किराको फैलावट कसरी हुन्छ र कहाँ कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे तत्कालै जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
(कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
१४ असार २०७७, आईतवार १३:५३ Dhunebeshi Khabar
← बिस्तारै पहाड उक्लदै सलह
छोरीहरुसँग हिमानी शाहको टिकटक भिडियो भाइरल →